Izolo uGowalla umemezele ukusebenzisana nomunye wemikhiqizo emikhulu emhlabeni - iWalt Disney, Inc .. Kunabantu abaningi abangakholelwa emithonjeni yezokuxhumana - ingasaphathwa eyezinhlelo zokusebenza ze-geo-social ezifana neGowalla, (Foursquare kanye neFacebook Places.) Ngakho, kungani lokhu kubambisana kunengqondo?
Okokuqala, kunengqondo, ngoba uGowalla umayelana nokuzibandakanya komsebenzisi! Le sevisi, uhlelo lwayo olufakwe ku-iPhone yami, lwenza kube lula ukungena ezindaweni ezikulo lonke idolobha lakho nasemhlabeni jikelele. Ukuhwebelana ngokwabelana ngama-haunts wakho owathandayo, amathiphu nezithombe, uklonyeliswa ngezitembu kupasipoti yakho nezinto ezibonakalayo ezisele ngemuva ezindaweni. Kukuhlanganiswa okukhulu kwe-geo-caching, ukuzingelwa kwabafuneki, namamephu ezokuvakasha - ahlanganiswe iphakethe elilodwa elinezithombe ezinhle.
KumaDisney Parks, lokhu kusebenzisana komsebenzisi kuhumushela kwesinye isisetshenziswa ukunweba ukuzibandakanya phakathi nohambo, ukujabulisa izivakashi nokuzikhuthaza ukuthi zihlole. Ohambweni lwami lokuqala lokuya eWalt Disney World, ngathenga ipasipoti ye-EPCOT, eyangiholela esitolo sezikhumbuzo sawo wonke amazwe ayi-9 ku-World Showcase, lapho engangithola khona isitembu kanye ne-autograph kwilungu lomlingisi. [Phinda ufunde lowo musho wokugcina, bakhangisi.] Ngihudulele abazali bami ezitolo ezi-9 ezahlukene, ngishintsha izitembu! Isisho esidala kunazo zonke zezakhiwo zeDisney - “konke ukugibela kugcina esitolo sezipho.”
Doug futhi ngikhuthaza amakhasimende ethu ukuthi asebenzise izindlela ezisebenza kahle kakhulu ukubandakanya abasebenzisi nokukala ukuguqulwa. Ezweni elikhulayo elihamba phambili nelidijithali, kungani ungasebenzisi ithuluzi elifana neGowalla? Njengengxenye yokwethulwa, iDisney ihlinzekele izivakashi ngohambo lweGowalla olufaka izivakashi eziholela izivakashi ekugibeleni okuyinhloko (nasezitolo) kuwo wonke amapaki. Ngokushintshana, iDisney ithola izibalo ezibalulekile ngenani lezindawo izivakashi ezivakashelayo, okugibele zithandwa kakhulu, okuwukuthi amapaki athola ithrafikhi eningi, njll. Uma sekuhlanganiswe nedatha yemvelo yabantu iDisney eyiqoqayo kuzivakashi, inokubaluleka okukhulu ingcebo yolwazi, yona-ke engasetshenziselwa ukufaka amakhasimende kabusha futhi idale ukuguqulwa okusebenza kahle.
Abezindaba bokumaketha bahlala beshintsha, kepha ukuzibandakanya komsebenzisi kufanele kuhlale njalo. Yimaphi amathuluzi atholakala lapho inkampani yakho ingaqala ukuhlola ukwenza ngcono ukuzibandakanya nokuguqulwa?